VerbalizeIt: Ngwa, Ederede, Audio na Ntughari vidiyo | Martech Zone
VerbalizeIt: Ngwa, Ederede, Audio na Video Translation
Sunday, Eprel 20, 2014 Douglas Karr
Nyochaa ntụgharị asụsụ ntụgharị asụsụ na -edetu ọdịnaya gị ebugoro na obodo agwakọtara maka ntụgharị asụsụ, nyocha na ịlaghachi n'ime awa 24-48. Naanị ndị 10% kacha elu nke ndị ruru eru ka a kpọrọ ka ha sonyere na mpaghara ntụgharị asụsụ na nzaghachi nzaghachi sitere na ndị isi obodo VerbalizeIt, ndị ahịa na nyocha na-aga n'ihu iji hụ na ha kwụghachi ndị nsụgharị kachasị elu, zụọ ndị ntụgharị nwere nnukwu ntụgharị, ma pụọ ​​ndị na-emeghị ihe ngosi .
Gbanwee ya nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka na ntụgharị asụsụ ederede, ntụgharị asụsụ ọdịyo, ntụgharị vidiyo na ọbụlagodi nyere gị aka ịtụgharị ekwentị gị ma ọ bụ ngwa weebụ. Nke a bụ ohere dị ịtụnanya maka azụmaahịa gị ịgbasa n'ụwa niile wee jiri uru nke mmejuputa iwu na-asụ asụsụ na-enweghị ịgbakwunye ụgwọ nke ụlọ ọrụ ụwa.
Tags: translationige nti
Ule Livefyre Sidenote maka ịza ajụjụ